မိဘမဲ့ကလေးတစ်ယောက် ရဲ့ ခံစားချက်အတိုင်းခံစား သီဆိုထားတဲ့ အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့်ရဲ့ မိဘမဲ့ သီချင်းလေး…….. – Cele Oscar
December 28, 2021 By L YC Celebrity
ပရိသတျကွီးရေ အနုပညာ သကျတမျးတဈလြှောကျ မှာ အသံစူးစူးလေးနဲ့ အသညျးကှဲသီခငျြးတှေ နဲ့ အောငျမွငျမှုရရှိခဲ့တဲ့ အဆိုရှငျ ကတော့ အိုငျးရငျးဇငျမာမွငျ့ပဲ ဖွဈပါတယျနျော..အိုငျးရငျး ကတော့ အနုပညာ ပါရမီ ပါသူပီပီ သူမ သီဆိုလိုကျတဲ့ သီခငျြးတိုငျးကို လညျး ပရိသတျတှကေ အားပေး နှဈသကျကွတာ ဖွဈပါတယျ။
သူမက ကိုဗဈ ကာလမှာ မိခငျဖွဈသူ ကို ဆုံးရှုံးထားရတာ ဖွဈတဲ့အတှကျလညျးမိဘ နဲ့ ပကျသကျရငျ ခံစားခကျြကွီး မားသူလေး ဖွဈပါတယျနျော. ..ဒီနလေ့ေးမှာတော့ အိုငျးရငျး က ” မိဘမဲ့ကလေးတဈယောကျ ရဲ့ ခံစားခကျြပါIrene ရဲ့ ပထမဆုံးမိဘမဲ့ ဘဝနဲ့Christmas ခံစားခကျြအားလုံးပဲMerry Christmas ပါနျော ” ဆိုပွီး သီခငျြးလေးနဲ့ အတူ တငျပေးလာတာ ဖွဈပါတယျနျော..
နားထောငျမိသူ တိုငျး ငိုခဲ့ရတဲ့ အိုငျးရငျးသီခငျြးလေးကို လညျး ပရိသတျကွီးလညျး အားပေးစကားလေး ရေးပေးခဲ့ကွပါအုံးနျော…ဖတျရှု့ပေးသူ တဈယောကျခငျြးစီတိုငျးကိုလညျးကြေးဇူးအထူးတငျရှိပါတယျ။
ပရိသတ်ကြီးရေ အနုပညာ သက်တမ်းတစ်လျှောက် မှာ အသံစူးစူးလေးနဲ့ အသည်းကွဲသီချင်းတွေ နဲ့ အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တဲ့ အဆိုရှင် ကတော့ အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်..အိုင်းရင်း ကတော့ အနုပညာ ပါရမီ ပါသူပီပီ သူမ သီဆိုလိုက်တဲ့ သီချင်းတိုင်းကို လည်း ပရိသတ်တွေက အားပေး နှစ်သက်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူမက ကိုဗစ် ကာလမှာ မိခင်ဖြစ်သူ ကို ဆုံးရှုံးထားရတာ ဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းမိဘ နဲ့ ပက်သက်ရင် ခံစားချက်ကြီး မားသူလေး ဖြစ်ပါတယ်နော်. ..ဒီနေ့လေးမှာတော့ အိုင်းရင်း က ” မိဘမဲ့ကလေးတစ်ယောက် ရဲ့ ခံစားချက်ပါIrene ရဲ့ ပထမဆုံးမိဘမဲ့ ဘဝနဲ့Christmas ခံစားချက်အားလုံးပဲMerry Christmas ပါနော် ” ဆိုပြီး သီချင်းလေးနဲ့ အတူ တင်ပေးလာတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်..
နားထောင်မိသူ တိုင်း ငိုခဲ့ရတဲ့ အိုင်းရင်းသီချင်းလေးကို လည်း ပရိသတ်ကြီးလည်း အားပေးစကားလေး ရေးပေးခဲ့ကြပါအုံးနော်…ဖတ်ရှု့ပေးသူ တစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။